Dr. Abiyyi Ahmad: Abdii egeree Oromoo, sabootaafi sablammiilee
Dr. Abiyyi Ahmad: Abdii egeree Oromoo, sabootaafi sablammiilee Featured
Godinni Jimmaa godina qabeenya uumamaatiin daran badhaate yoo taatu, keessumaa warqii magariisa jedhamuun kan beekamuufi lafee dugdaa dinagdee biyya keenyaa kan ta'e, buna omishuun beekamti. Oomisha bunaa biyyattiif gumaachuun sharafni alaa guddaan argamuun dinagdee biyyaa keessatti qooda olaanaa qabaachuun beekamti.
Keessumaa aanaalee godinichaa keessaa aanaan Gommaa bakka argama 'coffee Arabica' yoo taatu, Aggaaroon magaalaa guddittii aanichaati. Aggaaroon omisha bunaatiin daran badhaatuu waan taateef “Aggaaroo Abbaabooqaati, biyya birriin tooraati” jechuun faarsu.
Aggaaroon warqii magariisa qofa miti kan Oromiyaafi Itoophiyaa badhaaste. Ebla 15 bara 1968 ilmi mul'ata qabuufi fuulduratti sabasaatiif quuqamuun bu'aa olaanaa buusu tokkos badhaasteetti. Daa'imni sun gaafa dhalate akkuma daa'ima Oromiyaatti dhalatu kamiyyuu dhalatee kan guddate malee kunuunsi addaa maatiin isaa taasisaniif hinturre. Daa'imni kun Abiyyi Ahmad Alii jedhamee maqaan itti moggaafame. Abiyyi ijoollummaasaarraa kaasee nama kaayyoofi quuqama ummataa qabu akka ture seenaansaa ni ibsa.
Abiyyi barnootasaa sadarkaa tokkoffaafi lammaffaa magaalota Aggaaroofi Jimmaatti kan hordofe yoo ta'u, ciminnisaa achumaa kan eegaleedha. Hunda caalaa nama barnootatti amanuufi xiyyeeffannaa kennudha.
Haala kanaan barnootasaa sadarkaa lammaffaa xumuruun, bara 1993 digriisaa jalqabaa Fifinneetti kolleejii “Micro Link Information Technology” irraa Injiinariingii Kompiyutariin argateera. Bara 2003 ammoo akaakuu barnootaa 'Transformation Leadership and Change' jedhamu biyya Landanitti kan argamuufi qindoominaan Itoophiyaatti kan argamu 'Greenwich University' irraa digriisaa lammaffaa fudhateera.
Bara 1997 keessas Afrikaa Kibbaarraa akaakuu barnoota, 'Computer Cryptology'dhaan digrii lammaffaa argateera. Bara 2005 ammoo akaakuu barnootaa 'Business Administration'n Yunvarsiitii Ayislaandi irraa digrii maastireetii biraa argachuusaa seenaansaa ni ibsa.
Digrii doktireetiisaanii immoo Yunvarsiitii Finfinneerraa akaakuu barnootaa 'Peace and Security'n fudhataniiru. Kabajniifi fudhamnisaaniis daran dabaleera.
Dhaabbata Demokraasummaa Ummata Oromoo 'DhDUO' keessattis hojii cimaa hojjetaniiru. Raayyaa Ittisa Biyyaa keessattis sadarkaa Leetanaal Koloneelummaarraa ga'aniiru. Dhaabbata Mootummoota Walta'aniitti Miseensa Humna Mirkaneessaa Nagaa ta'anii Ruwaandaa, Kiigaaliitti tajaajluun nama maqaa gaarii biyyattii sadarkaa Afrikaatti waamsisaniidha.
Bara 2002 irraa eegalee miseensa koree giddugaleessaa, bara 2007 irraa eegalee hanga har'aatti, Koree Raawwachiistuu Hojii DhDUO ta'uun tajaajilurratti argamu.
Bara 2005 irraa eegalee Miseensa Koree Raawwachiiftuu Hojii Adda Warraqsa Ummattoota Itoophiyaa 'ADWUI' ta'uudhaan kan tajaajilan Dr. Abiyyi, gama ittigaafatamummaa hojii mootummaatiin ummata Godina Jimmaa Magaalaa Aggaaroo bakka bu'uudhaan Miseensa Mana Maree Bakka Bu'oota Ummataa ta'anii filatamuun biyyaafi ummatasaanii tajaajilurratti argamu.
Hundeessaa Daarektara Olaanaa Nageenyaafi Quunnamtii Odeeffannoo Biyyaaleessaa ykn 'INSA' ta'uudhaanis ga'umsaan tajaajilaa turan. Daarektara Giddugaleessa Odeeffannoo Saayinsiifi Teknoolojii ta'uuis tajaajilaniiru. Ministeera Saayinsiifi Teknolojii Biyyaalessaa ta'uunis ga'umsa olaanaadhaan ogganaa turaniiru.
Dr. Abiyyi Ahmad bara 2008tti irraa eegalee sadarkaa pirezidaantiitti ittaanaatti Hogganaa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneen Oromiyaa ta'anii hojjetaniiru.
Ittigaafatanaa Waajjira Giddugaleessaa DhDUO ta'uunis ga'umsaan dhaabaafi ummata bakka isaan buufate tajaajilaniiru. Kana malees bara 2000 hanga 2002tti Miseensa Boordii Dhaabbata Raadiyoofi Televizyinii Itoophiyaa, bara 2001 hanga bara 2002tti Miseensa Boordii Korporeeshinii Telekominikeeshinii Itoophiyaa, bara 2000 hanga 2002tti 'Ethiopia Media and Expansion'tti sadarkaa maanaajaraatti tajaajilaniiru.
Bara 2007 irraa eegalee walitti qabaa Boordii Intarpiraayizii Daandii Saffisaa akkasumas, walitti qabaa Waldaa Hojiilee Ijaarsa Dizaayiniifi Supparvizyinii Itoophiyaa ta'anii tajaajilaniiru. Walitti qabaa Boordii OBN ta'uunis hanga harraatti hojjetaa jiru.
Dr. Abiyyi Ahmad guddina biyyasaaniitiif nama of qusachuu hinbeekneefi halkanii guyyaa guddina ummatasaaniif tattaafataniidha. Gaggeessummaa waliiniitti nama amanan, qindoominaan hojjechuun jijjiirama biyyaa fiduuf nama aantummaa guutuu qabaniidha.
Tokkummaa biyyaalessaafi walqixxummaa sabootaafi sablammootaatti onneerraa kan amananiifi kana galmaan ga'uufis kutannoodhaan nama hojjetaa jiraniidha. Jijjirama biyyattii keessatti dhufe arguuf nama rafee hinbulleedha.
Jijjiramuu jireenya sabootaafi sablammoota Itoophiyaatti amanuudhaan biyyasaanii tajaajilanii darbuuf nama of qopheessaniidha.
Hayyuu imala beekumsaafi barnootaatiif taasifamuuf iddoo olaanaa kennan Dr. Abiyyi, beekumsiifi barnoonni furtuu waa hundaati jedhanii amanu. Ogummaan kabajamuu qaba, keessattuu kitaaba dubbisuufi barreessuun dhalootas biyyas gara jijjiiramaatti geessa ilaalcha jedhus ni qabu. Dhaloonni kitaaba dubiisuun of ga'oomsuun biyyasaas ta'e dhaloota ittaanuuf daandii saaqee seenaa kaa'ee darbuu qaba jedhanii amanu.
Dr. Abiyy Ahmad gaggeessaafi hayyuu waa hedduu irraa baratamuudha. Barnootaan of ga'oomsaa deemuu, ga'umsaan ummata ofii tajaajiluu halkaniifi guyyaa ummata isaaniif of kennanii halkaniifi guyyaa ummatasaanii tajaajiluun nama fakkeenyummaa gaarii qabaniifi namni martii irraa barachuu maluu ta'uudhaa seenaan isaanii weebsaatiwwan addaddaafi dokimantarii OBN irraa arganne kan agarsisu.
Koreen Gidduugaleessa DhDUO waltajjii tibbana adeemsiseen hoggantoota dhaabichaa qabsoo akka naannoo Oromiyaafi akka biyyaatti taasifamu milkeessuuf hidhatee jira. Hojiileen haaromsaa waggoota muraasaa as eegalamaniis caalaatti firii gaarii akka fidaniif marii bal'aa gaggeessuun dhiheenya kana Dr. Abiyyi Ahmad Durataa'aa DhDUO taasisee filateera.
Kunis kan ta'e gaaffii aangoo gadi lakkisuu Ministirri Muummee Itoophiyaa, Obbo Hayilamaariyaam Dassaalany dhiheessan bu'uura godhachuun bakkee hogganummaa namni bakka bu'uuf ga'umsa qabanitti amanuudhaani.
Akkuma yaadames marii gadii fagoo ADWUIn taasiseefi filannoo miseensota mana maree addichaatiin Dr. Abiyyi Ahmad Alii Durataa'aa ADWUI ta'anii Roobii darbe filatamaniiru.
Oduun filatamuusaanii erga dhaga'aame kaasees ummanni, hayyoonni, abbootiin amantii, dargaggoonni, dubartoonniifi maanguddoonni gammachuusaanii haala addaddaatii ibsataniiru. Keessumaa seenaan kun Oromoof seenaa guddaa ta'uusaati yaada namoonni kennan irraa kan hubatamu.
Gammachuufi abdii isaan Dr. Abiyyirraa qabanis hojiitti geddaramee bu'aa gaarii akka galmeessisuuf hawwii qaban ni himu. Keessumaa filatamuu durataa'ummaasaaniitiin walqabatee minisitira muummee biyyattii ta'uuf imalasaanii kan xumuran Dr. Abiyyi, sabootaafi sablammoota biyyattiif jijjiirama qabatamaa ni fidu jedhamee abdatama. Nutis barri aangoo isaanii kan milkaa'eefi imaanaa itti kenname kan itti ba'atan akka ta'u ni hawwina.
Qindeessituun Saamraawiit Girmaa
Torban kana/This_Week 11790
Torban darbe/This_Month 91627
Guyyaa mara/All_Days 1603585